Umvuzo wentlalo: yintoni, iimfuno kunye nendlela yokufumana | Ezezimali
Encarni Arcoya | 02/08/2021 08:55 | Ukuhlaziywa ukuba 31/07/2021 16:27 | Uqoqosho ngokubanzi
Wakhe weva ngomvuzo wentlalo? Nangona eli gama linokukulahlekisa, luluncedo, ngaphandle kwesibonelelo sokungabikho kwemisebenzi okanye izibonelelo zokungaqeshwa ezikhoyo, kwaye, nangona inceda abantu abaninzi baseSpain, inyani kukuba ayaziwa njengamanye amanani ezoqoqosho.
Kodwa, Uyintoni umvuzo wentlalo? Ngubani onokuyicela? Zithini iimfuno? Uhlawuliswa malini kwaye njani? Ukuba sele uzibuza yonke le mibuzo, kunye neminye emininzi, nikela ingqalelo kulwazi esikuhlanganisele lona.
1 Uyintoni umvuzo wentlalo
2 Yimalini intlawulo yentlawulo ehlawulwayo
3 Zithini iimfuno zokucela umvuzo wentlalo
4 Inokufakwa phi isicelo?
4.1 Ungasenza njani isicelo
5 Bangena nini kumvuzo wentlalo
6 Kuthekani ukuba ndiyala
Uyintoni umvuzo wentlalo
Masiqale ngokuchaza, okanye ukuqonda, ukuba yintoni umvuzo wentlalo. Yi Uncedo kwezoqoqosho, ngaphandle kolunye uncedo okanye izibonelelo, ezijolise ngaphezu kwako konke ekunikezeleni abemi imali abanokufikelela ngayo kwiimfuno zabo ezisisiseko kwaye ke ube nobomi obunesidima. Ngamanye amagama, luyilo olunikwa umntu okanye icandelo losapho elingenakho ukufikelela kwizibonelelo okanye elingenayo ingeniso encinci ukuze likwazi ukuhlala. Ke, ngalo mgangatho wobomi usisiseko unikezelwayo, ngokwaneleyo ukuqinisekisa ukuba loo mntu anganelisa iimfuno ezisisiseko zomntu.
Lo mvuzo wentlalo umiselwe luLuntu oluZimeleyo kwaye uqhele ukuvela xa izibonelelo zokungaphangeli koluntu ziphelile, kodwa inokuqokelelwa ngelixa ifunyanwa ukuba kuthotho lweemfuno.
Ngokwenyani, mininzi "imivuzo yentlalo", ngohlobo lweegranti kunye neenkxaso. Okona kutsha nje kukuqala ngo-2020, apho, kumakhaya angakhuselekanga, oko kubizwa ngokuba ngumvuzo omncinci obalulekileyo kwenziwa, nto leyo engenye ngaphandle komvuzo wentlalo.
Yimalini intlawulo yentlawulo ehlawulwayo
Siyaxolisa ukukuxelela lonto akukho "ngqo" Endaweni yoko, ibalwa ngokusekwe kwiimeko zomntu okanye icandelo elithile losapho, imeko anayo umenzi-sicelo kunye noko akufunayo.
Ngokubanzi, izinto eziqwalaselweyo xa kubalwa isibonelelo zihlala: ingeniso (nokuba incinci kangakanani iyakuthathelwa ingqalelo), iimeko zokuphila kunye namalungu ecandelo losapho.
Nangona kunjalo, ngokomThetho kuMvuzo oSisiseko weNtlalontle, kukho ubuninzi ekufuneka bufunyenwe ngokwenqanaba leyunithi yosapho. Umzekelo, ukuba awutshatanga, uya kufumana ubuninzi phantse bee-euro ezingama-450; Ngelixa kukho abantu aba-4, umvuzo unokufikelela phantse kuma-euro angama-700.
Zithini iimfuno zokucela umvuzo wentlalo
Kuya kufuneka siqale ngengqikelelo yokuba Uluntu ngalunye oluzimeleyo lunokucela ezinye iimfuno ezongezelelweyo kwabo banokuba "yinto eqhelekileyo" kuzo zonke. Oko kukuthi, kunokubakho iimfuno ezingaphezulu kunezo esiza kukuchazela apha ngezantsi, ngaloo ndlela siqinisa amandla okukucela.
Ngokubanzi, kuya kufuneka uthobele i-priori nge:
Bhaliswa edolophini kuLuntu oluZimeleyo apho uya kucela khona umvuzo wentlalo. Olu bhaliso kufuneka lube lonyaka omnye ubuncinci.
Kuya kufuneka uzibophelele ekuthatheni inxaxheba kuqeqesho nakwimisebenzi yokubeka imisebenzi kwi-Autonomous Community. Injongo kukuba awufuni ukuba umntu afumane umvuzo kuphela kwaye yiyo loo nto, kodwa ube namathuba emisebenzi anokufumana umsebenzi.
Emva kokuzigqiba izibonelelo kunye noncedo lwe-SEPE. Okanye ungakhange ukwazi ukuzonwabisa ngenxa yokuba awunalungelo labo.
Ukungabinayo ingeniso kwezinye iindlela ngaphandle komsebenzi, oko kukuthi, ukungabi nengeniso, umvuzo ngohlobo, iiflethi zokurenta, njl.
Inokufakwa phi isicelo?
Umvuzo wentlalontle uncedo olukhoyo kwiiNdawo ezizimeleyo phantsi kwamagama ahlukeneyo. Eyona nto intle kukucela ulwazi kwiiHolo zeDolophu nakwiSEPE kuba kulapho banokukunceda khona.
Ungasenza njani isicelo
Ngoku uyazi ukuba uhlangabezana neemfuno ezisisiseko (Siyakukhumbuza ukuba kuluntu ngalunye oluzimeleyo banokubeka ngaphezulu), kubalulekile ukuba uyazi ukuba wenzeni ukucela umvuzo wentlalo. Ukwenza oku, kuya kufuneka ulungiselele la maxwebhu alandelayo:
Ubalo lwabantu. Ayisebenzi kunye noxwebhu oluthi ubhalisile, kodwa udinga oluchaza ukuba ubunexesha elingakanani ukuloo ndawo.
Isatifikethi sokuhlala kunye.
Isibhengezo esinoxanduva (kukho imodeli yoku).
I-ID kunye nencwadi yebhanki enenombolo ye-akhawunti.
Nje ukuba unayo yonke into kufuneka uye kwiiNkonzo zeNtlalo kamasipala wakho. Ezi zihlala zihlala kwiBhunga lesiXeko, kodwa kukho amaxesha apho oku kusenziwa khona nge-SEPE okanye amanye amaqumrhu engingqi.
Ngubani onokukwazisa ngcono yiholo yakho yedolophu, eya kukuxelela ukuba uye phi.
Bangena nini kumvuzo wentlalo
Nje ukuba uwangenise amaxwebhu, zixhobise ngomonde kuba yinkqubo ende necothayo. Inokongezwa ngexesha ukuya kuthi ga kunyaka wokuthatha isigqibo okanye ngokuchasene nomvuzo wentlalo.
Ngelo xesha akukho nto ingako unokuyenza kuba imicimbi yezobugcisa ayinakusonjululwa nangayiphi na enye indlela ngaphandle kwexesha. Ngoku, into efanayo ayenzeki kuzo zonke iiLuntu ezizimeleyo; kukho ezinye ezikhawulezayo kunezinye kwaye ezinomgca omncinci kolu hlobo loncedo.
Ukuba uthe ekugqibeleni wanikwa olu ncedo, uyakufumana ileta echaza ukuba isicelo sakho samkelwe. Oku kunokuba yincwadi yeposi okanye isaziso kwi-imeyile yomyalezo ngeofisi ye-elektroniki (kuba unokujonga kwifayile kwi-Intanethi ukwazi ukuba inkqubo iqhubeka njani).
Nje ukuba kunikwe, esiqhelekileyo kukuba umvuzo wenzeka qho ngenyanga, phakathi komhla woku-1 nowe-10 kwinyanga nganye.
Kuthekani ukuba ndiyala
Kungenzeka ukuba, ngaphandle kwesicelo sakho, bayala ukukunika umvuzo wentlalontle. Kule meko unakho thyola ngokwazisa ubungqina obusekelwe kwizizathu abakunika zona zokuba unqatshelwe umvuzo wakho.
Ungayicela kwakhona, nangona kunokwenzeka ukuba baphinde bayala kwakhona ukuba uyayenza kwakamsinya.
Njengoko ubona, umvuzo wentlalontle uluncedo ekwaneliseni iimfuno ezisisiseko zabantu. Waziwa ngamagama amaninzi, uliline lokuphilisa abaninzi abangenazo izibonelelo kwaye abafuna uncedo. Ngaba ubusazi ngolu hlobo lwesibonelelo? Ngaba ukhe wayicela?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Umvuzo wentlalo
Yintoni isibonelelo sokwenza igalelo